Foomka waxyeellada bistoolada iyo sababta keentay kala-baxa korantada?
1. Noocyada ugu muhiimsan ee dhaawaca piston: (1) Xagashada dusha sare; (2) Bistoolada ayaa jabtay; (3) Dildilaac iyo jarjar ayaa dhacaya 2.Waa maxay sababaha dhaawaca bistoolada? ...Akhri wax dheeraad ah »
Dhamaantiin waad ku mahadsan tihiin taageeradiina Yantai Jiwei sanadkii la soo dhaafay
Waqtiga boostada: Dec-24-2020
Dhamaantiin waad ku mahadsan tihiin taageeradiina Yantai Jiwei sanadkii la soo dhaafay. Si aan u muujino mahadnaqeena kalgacalka badan iyo adiga sida wanaagsan, Yantai Jiwei wuxuu yiri waxaad ku raaxeysan kartaa qiimo dhimista ku habboon haddii aad iibsato HMB haatrooliga iyo waxyaabaha la xiriira inta lagu jiro muddada Kirismaska.Akhri wax dheeraad ah »
Yantai Jiwei 2020 (Xagaaga) "Wadajirka, Isgaarsiinta, Iskaashiga" Waxqabadka Bullying 11-kii Julaay, 2020, warshad lifaaqa HMB waxay abaabushay Waxqabad Bullying ， Ma aha oo kaliya nasashada iyo mideynta kooxdeena, laakiin sidoo kale u oggolaan karta mid kasta oo u ...Akhri wax dheeraad ah »
Excon India 2019 waxaa la dhammeeyay 14-kii Diseembar, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan macaamiisheenna oo ku booqday meheradda HMB meelo fogfog, mahadsanidin sida ay daacad ugu yihiin HMB hawo-jabiyaha. Intii lagu guda jiray bandhigan shanta maalmood ah, kooxda HMB India waxay ka heshay in ka badan 150 macmiil oo ka kala yimid meelo kala duwan ...Akhri wax dheeraad ah »
The Middle East Concrete 2019 / The Big 5 culus 2019, oo lagu qabtay 25 - 28 Noofambar 2019 magaalada Dubai ee Isutagga Imaaraatka Carabta, ayaa soo dhammaaday Kahor bilowga bandhigga, Yantai Jiwei wuxuu diyaar garow buuxa ugu jiray bandhigga. Had iyo jeer waxaan ka hor marnaa tayada, mana d ...Akhri wax dheeraad ah »